Zaghachi: Gbanwee Aka Gị Ahịa Ahịa Na LinkedIn Email Search na Outreach | Martech Zone
Ọ dịghị onye ga-arụ ụka na LinkedIn bụ usoro ịkparịta ụka n'businessntanet nke zuru ezu na azụmahịa. N'ezie, eleghị m anya mmalite agbakwunyere maka nwa akwukwo ma ọ bụ melite mmalite nke m n'ime afọ iri kemgbe eji LinkedIn. Ọ bụghị naanị na LinkedIn na-enye m ohere ịhụ ihe niile mbido na-eme, kamakwa m nwere ike nyochaa netwọọdụ onye ahụ wee hụ onye ha na ya rụkọrọ ọrụ na - wee kpọtụrụ ndị ahụ ka ịmatakwu.
N'ezie, ọ bụghị naanị ihe enyemaka maka ndị na-achọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ngo… ọ bụkwa ebe nchekwa data kachasị dị na mbara ala maka ndị na-egwupụta akụ na atụmanya yana, ọkachasị ma ị na-ebuga Ahịa-Dabere na Ahịa atụmatụ.
zaghachi bụ multichannel ahịa njikọ aka n'elu ikpo okwu nke na-eme ka ozi ịntanetị onwe gị, oku, na ọrụ ya rụọ ọrụ, ebe Ahịa nwere ike ilekwasị anya na ihe dị mkpa - mmechi mmechi. Nke a bụ nnukwu nyocha vidiyo:
Zaghachi Atụmatụ Gụnye
zaghachi na-enyere gị aka ịchọta atụmanya dị mma maka mkpọsa mgbasa ozi LinkedIn gị sitere na Salesforce, Hubspot, Copper CRM, yana ọtụtụ ndị na-enye data site na njikọta nke ala na ọrụ ndị ọzọ.
Mgbatị LinkedIn Chrome - Chọpụta atụmanya azụmaahịa dị na LinkedIn ma bulite arụmọrụ gị na Zaghachi ndọtị Chrome. Ọrụ gị kwa ụbọchị na ike ijikọ site na LinkedIn, ozi ịntanetị na olu na-eru mgbe niile.
Usoro usoro ọrịre dị iche iche - Soro atụmanya gị rụọ ọrụ site na ọtụtụ ọwa - zipu ozi ịntanetị nkeonwe na nsonye, ​​kpọọ oku, mejupụta ọrụ kwa ụbọchị, jikọọ ma rute atụmanya gị na akpaghị aka na LinkedIn.
Arụ Ahịa - Kwalite ọrụ gị kwa ụbọchị yana ikike ijikọ na LinkedIn, email, olu na mmekọrịta mmadụ na ibe gị. Ihe ndekọ, ma jikọọ na obodo gị CRM, Zapier, ma ọ bụ site na njikọta API.
Njikwa Kọntaktị Ahịa - Jikwaa ndị na - achọ ịre ahịa nwayọ - kesaa atụmanya gị dị ka ọtụtụ ọnụọgụ iji mee ka ọrụ gị gbasaa. Bubata ma ọ bụ tinye kọntaktị, kọntaktị nke, kọntaktị nyo, nyochaa usoro ihe omume na ọrụ ha, yana ịdebanye aha maka ngalaba na kọntaktị.
Oku igwe oku - Jikọọ na atụmanya gị na ekwentị ziri ezi na akaụntụ Nzaghachi gị na ndọtị Chrome. Mejuputa olu gi na nkwukọrịta ahia gị na Igwe ojii.
Smart Sales Atụmatụ - Leverage Reply's AI-dependent atụmatụ iji tinye aka na atụmanya gị ka mma na ngwa ngwa - gụnyere nchịkọta ozi igbe, nyocha mma, na aro, omume ndị a tụrụ aro na oku a tụrụ aro maka atụmanya ọkụ.
Ahịa Team Edition - Imekota na mkpọsa na atụmanya, jikwaa ndị otu, ịkekọrịta email na ndebiri ndebiri, soro otu arụmọrụ na ndị ọzọ na Reply Team Edition.
Nkwupụta Ahịa na Nchịkọta - Sochie ọganiihu usoro gị wee nyochaa otu nsonaazụ gị site na iji akụkọ zuru ezu zaghachi na usoro, nsonaazụ otu, ịkpọ oku, ma kpọọ ntị yana ikike mbupụ.
Zaghachi Ngwaọrụ Mmezi - Gbanwee ozi gị ka ị rute arụmọrụ kacha elu - Nzaghachi nwere ngwa ọrụ akụrụngwa iji nyere gị aka ị nweta nsonaazụ kacha mma, gụnyere ogo email, nnwale A / B, ndebiri usoro, yana usoro izipu igbe.
Nweta nzaghachi ngosi
Ngosipụta: Anyị na-eji a zaghachi Mgbakwunye njikọ na edemede a.
Tags: kpọọ okudoro anyakọntaktịọla kọpadatanyzenyocha emailemail nkwadoKpọtụrụokpokoroLinkedInnjikọtamadkuduahia n'èzíọpụpụ ahịaugwozaghachinjikwa kọntaktị ahịantinye akaahịa njikọ aka n'elu ikpo okwuahia ahiaahịa akụkọndị ahịaikezoominfo